अन्तरराष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता नाईं मलाई थाहा छैन’ सम्बन्धी तयार पारिएका केही प्रश्न र उत्तरहरु | khaltinews.com
अन्तरराष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता नाईं मलाई थाहा छैन’ सम्बन्धी तयार पारिएका केही प्रश्न र उत्तरहरु
बाबा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सिडनी, अष्ट्रेलीया र काठमांडु, नेपालको प्रायोजनमा भइरहेको ‘नाईं मलाई थाहा छैन’ अन्तरराष्ट्रिय नृत्य प्रतियोगिता अहिले देश विदेशमा छरिएर रहनु हुने नेपालीहरुले नाचेर भिडीयो पठाउने क्रम जारी छ । यसै सन्दर्भमा नृत्य प्रतियोगिताका आयोजक तथा नाइँ मलाई थाहा छैनका गायक सन्जिब पराजुली संग गरिएको कुराकानी
प्रतियोगितामा भिडीयो कहिलेसम्म पठाइसक्नुु पर्छ ?
यस प्रतियोगितामा भाग लिन दुई वा दुई भन्दा बढिको समुहमा नाच्नु पर्नेछ । एकजनाले मात्र नाचेको भिडीयो प्रतियोगीतामा समावेश हुने छैन । अर्कोकुरा, दुइजना मात्र हुनुहुन्छ भने केटा–केटी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । केटा–केटी, केटा–केटा अथवा केटी–केटी भएर पनि नाच्न सक्नु हुनेछ ।
नाचेको भिडीयो कति लामो हुनु पर्नेछ ?
हाम्रो चाहना प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने प्रतियोगीहरुलाई सजिलो होस् भन्ने हो । मोबाइल वा साधारण क्यामेराले जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ नाचेको भिडीयो खिच्न सक्नु हुनेछ । भिडियो खिच्दा, तपाईँले नाचेको पुरै भाग (शरिर) क्यामेरामा कैद होस्, त्यो ध्यान राख्नुहोला । हामीलाई प्राप्त केही भिडीयोमा नाच्ने मान्छेको पुरै भाग (शरिर) देखिएको छैन र कुनै कुनै सामुहीक नृत्यको भिडीयोमा नाच्दा नाच्दै कोही–कोही भिडीयो बाहिर हुन पुग्नु भएको देखिन्छ । त्यसैले भिडीयो खिच्दा उपयुक्त दुरीमा रहेर सबै नृत्यगर्नेहरु भिडीयोमा देखिनुहोला ।
प्रतियोगिताको लागि खिचेको भिडीयो गायक संजिब पराजुली अथवा गायिका टीका प्रसाईंको फेसबुक पेज [Facebook.com/SanjibParajuli अथवा Facebook.com/Tika.Prasain.Music] को मैसेजमा गई पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा NaiMalaiCompetition@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । भिडीयो पठाउँदा नृत्य गर्ने व्यक्तिहरुको पुरा नाम, ठेगाना र सम्पर्क फोन नं. पनि सँगै मैसेज गर्नुहोस् । खिचेको भिडीयो पठाउन कुनै समस्या भए हाम्रा प्रतिनिधीहरुलाई [काठमाडौंः संदिप भट्टराई, मोबाइल नं. 9851138068, पूर्वाञ्चलः नीरज बज्राचार्य मोबाइल नं. 9849347801 सम्पर्क गरि मद्दत माग्न सक्नु हुनेछ ।
भिडीयो पठाइसकेपछि के हुन्छ ?
हामीलाई प्राप्त भिडीयो प्रतियोगिताको मापदण्ड अनुसार भए – नभएको हेर्नेछौँ र भिडीयो पठाउनुहुने व्यक्तिलाई खबर गर्नेछौँ । प्राप्त भिडीयो मापदण्ड अनुसारको भए भिडीयोलाई गायक संजिव पराजुलीको यू–ट्यूब च्यानल र फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गर्नेछौँ । यसरी सार्वजनिक भएको पोष्टलाई तपाइँहरुले बढि भन्दा बढि शेयर गर्नुहोला । तपाइँको भिडीयोमा आएका लाईक, कमेन्ट र शेयरले ले पनि उत्कृष्ट भिडीयोको छनौटमा केही भुमिका खेल्ने छ ।
हामीलाई प्राप्त र प्रतियोगिताको मापदण्ड अनुसार भएका भिडीयोहरुलाई नेपालका ख्यातिप्राप्त नृत्य गुरुहरु, कोरियोग्राफरहरु र डान्सरहरुको मुल्याङ्कनका आधारमा र हाम्रो फेसबुक पेज र यू–ट्यूब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको पोष्टमा आएका लाईक, कमेन्ट र शेयरका आधारमा उत्कृष्ट नृत्यको छनौट हुनेछ ।
आफुले नाचेको भिडीयो हामीले आफ्नै फेसबुक, यू–ट्यूब च्यानल वा अन्य सोसियल मिडीयामा राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ?
पाइँदैन । हामीलाई प्राप्त भिडीयो हामीले गायक पराजुलीको फेसबुक पेज र यू–ट्यूब च्यानलबाट तपाइँको भिडीयो सार्वजनिक गर्नेछौँ । तपाइँले आफ्नै वा अन्य कसैको फेसबुक वा यू–ट्यूब च्यालनबाट सार्वजनिक गरिएको भिडीयो प्रतियोगितामा समावेश हुने छैन ।
प्रतियोगिताको मापदण्ड अनुसार प्राप्त भएका भिडीयोहरुलाई नेपालका ख्यातिप्राप्त नृत्यगुरुहरु, कोरियोग्राफरहरु र डान्सरहरुको जजमेन्टका आधारमा उत्कृष्ट नृत्यको छनौट हुनेछ । छनौट प्रक्रिया प्रतियोगिता सकिए पछि अर्थात २८ फेब्रुअरी २०१७ पछि शुरु हुनेछ र यसको लागि दुई देखि तीन हफ्ताको समय लाग्ने छ ।
‘नाईं मलाई थाहा छैन’ अन्तरराष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता सम्बन्धी तपाईँहरुमा कुनै प्रश्न, जिज्ञासा वा सुझाव छन भने हामीलाई NaiMalaiCompetition@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नु हुनेछ । अन्य जानकारी तथा अपडेटका लागि गायक संजिब पराजुली र गायिका टीका प्रसाईंको फेसबुक पेज Facebook.com/SanjibParajuli र Facebook.com/Tika.Prasain.Music लाईक गरि हेर्दै गर्नुहोस् ।